Ekpere maka oriri nsọ a gọziri agọzi. ? nke ofufe, Ịrịọ maka ọrụ ebube na otuto
Ekpere Gọziri Agọzi Ọ bụ ọgbụgba ọkụ nke okwukwe Katọlik na-emekarị. Ndị kwere ekwe kwesịrị ịmara ekpere ndị a ka ha nwee ike mee ya mgbe ọ bụla anyị chọrọ.
Cheta na ekpere bu ihe anyi nwere ike iji oge obula anyi choro, anyi ekwesighi ime ya n’enweghi okwukwe kama inwere ezi mmetụta n’ime obi anyi na ihe anyi n’eme bu oru nke mo ma buru ihe anyi kwesiri iji kpọrọ ihe. .
Emere ekpere a, n’ọtụtụ oge iji fee Onye nwe anyị Jesu Kristi ofufe, na-ahụ aja o mere maka ụmụ mmadụ n’elu obe nke Calvary.
1 Ekpere Kachasị Ebe Nsọ Dị Ekpere Olee otu esi ekpe ekpere?
2 1) Ekpere maka idobe ihe kacha nsọ
3 2) Ekpere kari ndi kachasi ihe nsọ ario iriba
4 3) Ekpere ka ito Sakrament kacha ebe nile
5 4) Ekpere di nsọ
5.1 Isnye kacha dị nsọ?
5.2 Enwere m ike ịwụnye oriọna mgbe m na-ekpe ekpere ndị kasị nsọ?
Ekpere Kachasị Ebe Nsọ Dị Ekpere Olee otu esi ekpe ekpere?
1) Ekpere maka idobe ihe kacha nsọ
«Nna ebighi ebi, ana m ekele gị n'ihi na gị infinito Hashụnanya echebere m, ọbụlagodi uche m. Nna m daalụ maka nnukwu ntachi obi gị chere m. Chineke m, daalụ maka nnukwu ọmịiko gị nke mere m ebere. Naanị ụgwọ ọrụ m nwere ike inye gị na ụgwọ ihe niile i nyere m bụ adịghị ike m, ihe mgbu m na nhụjuanya m.
Anọ m n’ihu gị, mmụọ nke ihunanya, na ị bụ ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ, m chọkwara ịnọrọ n’ịhụnanya gị, achọrọ m idozi mmejọ m, mee onwe m ka m dị nsọ ma nye gị otuto m na otuto.
Gọziri Jesus, agam n’ihu Gị ma m chọrọ ịdọrọ obi na-enweghị atụ site n’obi gị nke Chukwu, kelee m maka mkpụrụ obi niile, maka Nzukọ nsọ, ndị ụkọchukwu gị na ndị okpukperechi. Kwe ka m, Jesu, oge awa a bụ ezigbo mmekọrịta, awa ọhụrụ m n'anya nke enyere m ịnabata nsọpụrụ niile nke Chineke gị debeere m.
Nwa agbọghọ na-amaghị nwanyị, nne nke Chukwu na nne m, a sonyere m na arịọ m gị ka ị sonye na mmetụta nke Obi Obi Gị.
Chi m! Ekwere m, ekwere m ife, enwere m olileanya na ahụkwara m gị n'anya. M na-arịọ mgbaghara maka ndị ekweghị, anaghị efe ofufe, echela ma hụghị gị n'anya.
Atọ n'Ime Otu kacha nsọ, Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, a na m asọpụrụ gị nke ukwuu ma na -enye gị ahụ, ọbara, mkpụrụ obi na ịdị nsọ nke Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, nọ n'ụlọikwuu niile nke ụwa, na nkwụghachi maka oke iwe niile. sacrileges na enweghị mmasị nke ya onwe ya na -akpasu iwe. Sitekwa n'ikike na -enweghị nsọtụ nke obi ya kacha dị nsọ na nke obi Meri na -adịghị ọcha, a na m arịọ gị maka ntụgharị nke ndị mmehie dara ogbenye. "
Ekpere nke nsọ nye ndi kachasi ihe nile na-egosipụta inyefe ihe kpam kpam site n'obiỌ bụ ya mere ekpere a ji dị oke mkpa n'ihi na ya, anyị agaghị na-arịọ maka ihe ọ bụla pụrụ iche, kama na anyị ga-enyefe obi anyị nye onye kwesịrị ya ma ọ bụ weda obi ihere dịka a kụziri n'okwu Chineke.
Ofufe, nke a na-esite n’obi na n’ezie bụ ngwa agha dị ike nke ime mmụọ.
2) Ekpere kari ndi kachasi ihe nsọ ario iriba
«Nna kacha elu nke eluigwe
Anyi na ekele gi, mbu
Maka aja i ji ihunanya mee, site n’ịnwu n’ihi mmehie anyi
Ọ bụ ya mere m ji mata gị, dịka onyenwe m, na naanị nzọpụta
Taa achọrọ m itinye Nna m hụrụ n'anya n'anya, ndụ m
Mara ihe m na-agabiga, na ihe m wedara n’ala n’iru gị
Nna okwu gị kwuru na ọnya gị ka a gwọrọ
Achọrọ m imezu nkwa a, ka ị wee gwọọ m
Dinwenu a na m arịọ gị ka ị bụrụ n’aka ndị ọkacha mara nke nwere okwu m
Na ị na-enye ya usoro dị mkpa ka ha wee nyere m aka
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe kacha nsọ gị Nna
Dọputam aka-nri-gi n’elum, sachapụ kwa arum
Wepụ ọrịa niile n’ime mkpụrụ ndụ m
Weghachite ọgwụgwọ m
A na m arịọ gị, Nna dị nsọ
Biko, tọọ ntị gị ntị ịnụ ekpere m
Na ihu Chukwu gị n’enweta amara n’ihu m
Obi siri m ike na ịnụla ekpere m
N’ezie, ị na-arụ ọrụ ịgwọ ọrịa n’ime m
Ka I mee uche Nna m
You chọrọ ọnụnọ Chineke na ndụ gị? Mgbe ahụ pray ga-ekpe Ekpere Nsọ Kachasị Nsọ ịrịọ maka ọrụ ebube.
Ekpere a ga - enyere gị aka inweta ọrụ ebube. Ma ọ̀ dị nfe ka ọ siri ike, ekpere ga-arụ ọrụ.
Jiri obi okwukwe kpee ekpere n’obi gị ma kwere na ike nke Chineke Onyenwe anyị mgbe niile.
3) Ekpere ka ito Sakrament kacha ebe nile
«Anata m taa ọkụ, udo na ebere
Site n'aka Onye-nwe ngọzi nke elu-igwe;
M na-enweta Jesus ahu na nkpuru obi
Ka ndụ m jupụta n'ekele, agụụ, obi ụtọ
Charisma na nguzosi ike tupu ọbịbịa gị;
Anọ m n'ime ime m
M n'obi obi dị nsọ okwukwe na-enye m ohere
Nọgide na-egwu mmiri n'oge nsogbu;
Eluigwe na ụwa na-atọ m ụtọ
Tupu njem nke ndụ m nke ahụ
Ejiri ihe nsọ kacha nsọ kpuchie ya.
Ana m ewere sacrament a na nkpuru obi m
Eji m obi ebere, obiọma na ịhụnanya nabata ya.
Ka udo nke mo nso diri anyi niile
Na na ákwà mgbochi nke ọchịchịrị na-apụ mgbe
Okwukwe m na-eme n’ọdịdị.
Nwee okwukwe n’ekpere a iji too sacrament kacha aja aja.
Otuto bu nbuli elu nke emere site n’obi na imata na imara na odighi onye dika ya. N'okwu a anyị na-eto Jehova, bụ eze ndị eze nyere onwe ya maka ịhụnanya. Na o diri ihe mgbu na mmechuihu nke na anyị nwere ezi nnwere onwe n’ime ya taa.
Otuto bu otu ihe di nkpa n’ekpere anyi nke anyi n’eleghara ileghara anya n’ihi na anyi aghaghi idi ike nke ike nke Onyenwe anyi na ndu anyi.
4) Ekpere di nsọ
"Oh Jizọs Chineke! na n'abalị ị ga -anọ naanị gị n'ọtụtụ ụlọikwuu nke ụwa, na -enweghị ihe ọ bụla e kere eke ga -eleta gị ma kpọọrọ gị isiala.
M na-enye gị obi m dara ogbenye, na-enwe olileanya na ọhụụ ya niile dị ka ịhụnanya na nsọpụrụ. Gi, Onye-nwe-ayi, nọ na-amụ anya mgbe nile n’okpuru ụdị oriri nsọ, ebere ebere gị anaghị ehi ụra ma ọ bụ taya na-eche ndị mmehie nche.
O Jesu, huru m n'anya, Jesu nke nani gi! Mee ka obim di ka oriọna na-enwu enwu; Inye ịhụnanya na-enwu ọkụ ma nwee ọkụ mgbe niile n'ịhụnanya gị. Lezienụ anya! Chukwu sentinel!
Lelee ụwa nhụsianya, maka ndị nchụàjà, maka mkpụrụ obi ndị edoro nsọ, ndị furu efu, maka ndị ọrịa na-arịa ọrịa, ndị abalị ha na-adịghị agwụ agwụ chọrọ ike gị na nkasi obi gị, maka ọnwụ na maka nke a ohu gị dị umeala n'obi nke na-enyere gị aka izu ike ma na-enweghị ịpụ. n’aka Gị, si n’ụlọikwuu gị… ebe gị na ịnọ naanị ya na ịnọ nkịtị.
Ka obi dị nsọ nke Jizọs bụrụ onye a na -agọzi, na -eto, na -asọpụrụ, na -ahụ n'anya ma na -asọpụrụ n'ụlọikwuu niile nke ụwa. Amen. "
Ekpere a na Sacrament na nke a gọziri agọzi tupu ị lakpuo ụra bụ otu n'ime ihe kachasị ike.
Tupu anyị ehiwe ụra, ọ dị mkpa ka ị na -ekpe ekpere ma ọ bụ kpegara Sacrament Nsọ pụrụ iche iji nyere anyị aka izu ike zuru ezu. Ramalite ikpere ekpere na oriri nsọ kachasị tupu anyị lakpuo ụra bụ ihe anyị ga-eme kwa ụbọchị ọbụlagodi, ịkụnye omume a ụmụaka bụ nnukwu ihe dị mkpa.
N'ime ụlọ ụka Katọlik, nke a bụ otu n'ime ekpere kachasị mkpa ka ọ na-ewusi okwukwe nke Iso Christianityzọ Kraịst ike ma na-ewusi mmụọ nsọ.
Ọ bụ ekpere nke mmata, otuto y Jesus na-efe ofufe na uwa ya diri mmadu. Anyị maara na ekpere na-ewetara abamuru anyị oge niile n'ihi na site na ya anyị na-ewusi gị ike, meekwa ka i jupụta n'udo, ọ bụ ya mere inwe ndụ mmekọrịta gị na Onyenwe anyị ji dị mkpa.
Isnye kacha dị nsọ?
Sakrament kacha dị nsọ bụ arụ nke okwukwe a na-eme na ụka Katọlik ebe anyị na-amata ma na-anabata aja nke Onye-nwe Jizọs Kraịst. A na-eme ihe a na Sọnde nke atọ nke ọnwa ọ bụla ebe ekpughere ya ka ndị kwere ekwe wee bulie ofufe ha.
Ndi ọbịa a raara nye bụ ihe nnọchianya nke aru Kraist nke azọpiaara maka mmehie anyị maka ịhụ mmadụ n'anya, ọ dịkwa mkpa ka ndị kwere ekwe niile nwee ihe ọmụma a iji wee nyefee onwe ha n'okpuru Onyenwe anyị.
Enwere m ike ịwụnye oriọna mgbe m na-ekpe ekpere ndị kasị nsọ?
Azịza ya bụ ee, ma ọ bụrụ na kandụl nwere ike ịcha ọkụ mgbe ị na-ekpe ekpere. Agbanyeghị, nke a abụghị iwu n'ihi na enwere ike ikpe ekpere n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla, anyị enweghịkwa ọkụ oriọna mgbe niile ikpe ekpere. Ọtụtụ ndị kwere ekwe na-ewuru ndị nsọ ha ebe ịchụàjà pụrụ iche ebe ha nwere kandụl na-enye ọkụ n'oge ụfọdụ akọwapụtara maka ofufe.
N'okwu nke ekpere ma n’omume nile nke Mo Nso okwukwe nke akpara ha na ya di nkpa di nkpa nihi na odi n’ebe ahu ka odi ha gha idu ha.
Okwu nke Onyenwe anyị kuziri anyị na anyị enweghị ike iji ekpere jupụta obi anyị niile na obi abụọ ma ọ bụ chee na ihe anyị na-arịọ siri ezigbo ike n'ihi na ekpere ahụ ga-abụ oge na-enweghị uru anyị na-agaghị enweta.
Atụrụ m anya na ị nụrụ ekpere n’ekpere ahụ. Nọnyere Chineke
Ike gozie ekpere